Broken Determinism | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
Broken Determinism	Posted by mm thinker on October 12, 2009
Posted in: Poem.	Tagged: Poem.	8 Comments
နှောငျကွိုးမဲ့လို့ ခံသာတယျ …
အဆုံးနားက ပွနျစတယျ …
ငါကိုယျတိုငျ ဆငျဆာဖွတျလိုကျတယျ …။
← Knight	dead of mm thinker →	8 comments on “Broken Determinism”
kom on October 13, 2009 at 12:41 pm said:
Reply	တေဇာအောင် on October 14, 2009 at 5:37 am said:
facebook မှာ ဖတ်ပြီးပြီမို့…..မမန့်တော့ဘူး…သက်သက် လာလည်တာ။။။
Reply	မိုးမောင် on October 15, 2009 at 12:57 am said:
ပြဌာန်းပြီးသား စာအုပ်မှ မဟုတ်တာ။ ဒီတော့ လုပ်သင့်တာတွေနည်းနည်း၊ လုပ်ချင်တာလေး များများ လုပ်ကြတာပေါ့။ ဟား ဟား။ ဟုတ်တယ် မှတ်လား ကိုနှောင်ကြိုးမဲ့ကြီး…။😀
Reply	ဆောင်းနှင်းပန်း on October 15, 2009 at 4:56 am said:
ပင်ဂွင်ငှက်ဖြစ်လည်း ခံသာတာပဲလေ နော်။
Reply	ကျော်သိင်္ခ on October 28, 2009 at 8:53 am said:
ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်။ တိုတယ်။ ထိတယ်။
Reply	ကဗျာဦး on October 31, 2009 at 8:07 pm said:
Reply	Yan Naing on November 1, 2009 at 8:58 am said:
ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာရဲ့ ကဗျာကိုဖတ်ရတာ ရေးရေးတော့ ပေါ်သလိုရှိပါတယ်။ mmthinker.blogspot.com ကိုလည်း ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုလိုပါတယ်။ invited readers only လို့တွေ့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော့်ကို invitation letter ပို့ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား…
Reply	မီသျှင် on November 23, 2009 at 10:18 am said: